Madagascar Dawo Dhaqameed u soo sartey COVID-19, waxaa baadhaya Saynisyahanno Jarmalka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madagascar Dawo Dhaqameed u soo sartey COVID-19, waxaa baadhaya Saynisyahanno Jarmalka
Madagascar Dawo Dhaqameed u soo sartey COVID-19, waxaa baadhaya Saynisyahanno Jarmalka
Saynisyahanno ka socda Machadka Max Planck ee Jarmalka ee ku yaallo Colloids iyo Isweydaarsiga ku yaal Potsdam ayaa ka mid ah koox cilmi baarayaal ah oo ka socda Jarmalka iyo Danmark oo kaashanaya shirkadda Mareykanka ee ‘ArtemiLife’ si ay u soo sahamiyaan in warshadda Artemisia loo adeegsan karo ka hortagga coronavirus-ka cusub.
“Waa daraasaddii ugu horreysay oo ay saynisyahannadu baarayaan shaqooyinka walxaha dhirtan leh ee la xiriira COVID-19,” madaxa cilmi-baarista, Peter Seeberger, ayaa u sheegay DW.
Daraasadda unugyadu waxay u isticmaali doontaa soosaaritaan tijaabo ah warshaddii Artemisia annua, oo sidoo kale loo yaqaan dixiriga macaan, iyo sidoo kale soo saarista laga soocay geedka sida artemisinin.
Xarunta Artemisia ayaa muddo dheer loo isticmaali jiray daaweynta duumada.
Madaxweynaha Madagascar Andry Rajoelina ayaa ku tilmaamay cabir ay ku jiraan soosaarista Artemisia iyo geedo kale oo ah “daawo mucjiso ah” oo loo yaqaan coronavirus.
Wixii markaas ka dambeeyay, warbaahinta Afrika waxay xaddiday suurtagalnimada cabitaanka, iyo dalal badan oo Afrikaan ah ayaa amarro ku soo saaray geedaha taranka, oo lagu iibiyay magaca ‘COVID Organics’.
Agaasimaha machadka cilmi baarista ee Malagasy IMRA, Charles Andrianjara, wuxuu si qoto dheer uga hadlay “tijaabooyinka dadka qaar” markii ay la soo xiriirtay DW wixii faahfaahin ah ee ku saabsan daraasad kasta oo saynis ah oo ku saabsan maskaxda, wuxuuna tixraacay sannado badan oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan qumanka.
Wuu awoodi waayey inuu sheego cilmi baaris gaar ah oo cadeyneysa awooda cabitaanka geedaha ay ka hortageyso ama daweyneyso COVID-19.
Waxa kale oo ay ku adag tahay saynisyahano kale inay tijaabiyaan nuxurka maadama qaaciddadiisa ay tahay mid sir ah – wada hadalkiisii ​​uu la yeeshay DW, Andrianjara wuxuu sheegay inuusan daaha ka qaadi karin sameynta si loo ilaaliyo xuquuqda hantida aqooneed.
Ururka Caafimaadka Adduunka, si kastaba ha ahaatee, wuxuu uga digayaa websaydhkiisa in “aysan jirin wax caddeyn ah oo muujinaya in COVID-19 laga hortagi karo ama lagu daaweyn karo badeecada laga sameeyay walxaha laga sameeyay dhirta Artemisia.”
In kasta oo ay suuragal tahay in daweynno cusub ay ka imaan karaan daawooyinka dhaqameed, ayuu yiri Michel Yao oo ka socda Xafiiska Gobolka ee WHO ee Afrika, dadku waa inay ka fogaadaan isticmaalka dawooyinka aan loo daweyn coronavirus.
Ma jirto wax caddeyn ah. Annagu garan mayno sida dawooyinkan dhaqameed, oo ay ku taliyaan dalal ama mas’uuliyiintu, ay dhab ahaan waxtar u leeyihiin iyo inay waxyeello u lahayn caafimaadka aadanaha, ”ayuu u sheegay DW.
Artemisia annua maahan daaweynta duumada ee ugu horreysa ee soo jiidata raadinta daweynta ka dhanka ah COVID-19. Daawada hydroxychloroquine ee duumada ayaa sidoo kale laga bogsaday bilihii la soo dhaafay inkasta oo macluumaad yar oo taageeraya wax ku oolnimada ka hortagga cudurka coronavirus.
Artemisia sidoo kale “si guul leh” ayaa loogala hortagay cudurada aan ka aheyn duumada, ayuu yiri Seeberger. Daraasado la sameeyay ayaa lagu ogaaday in soo saarista Artemisia ay wax ku ool u tahay xakamaynta SARS coronavirus-kii ugu horreeyay (SARS-CoV) ee ka dillaacay Aasiya 2002, taas oo keenta cudur neef-mareenka.
Saynisyahannadu waxay filayaan natiijooyinka dhammaadka Maajo dhammaadka ugu dambeeya. Haddii Artemisia la ogaado inuu wax ku ool yahay tijaabooyinkan, baaritaano dheeraad ah oo ay ku jiraan daraasado caafimaad oo ku saabsan aadanaha, ayaa wali u baahan doona inay dhacaan.
“Laakiin xitaa haddii rajada daawada ee ku saleysan maaddooyinka firfircoon ee ka dhanka ah COVID-19 ay ku dhammaato niyad jab, waxay noqon doontaa faa iido,” ayuu yiri Seeberger, “wax walba oo intaas ka badan, waxay keenaysaa caddeyn.”
In kasta oo qaar ka mid ah waddamada Afrika, sida Tansaaniya, Togo iyo Chad ay soo wariyeen amarrada Madagascar, kuwa kale – sida Nigeria – ayaa aad uga taxaddaraya iney soo iibsato dawo ka hortaga .
Isu duwaha COVID-19 ee Nigeria Sani Aliyu ayaa toddobaadkan sheegay shirkiisi kooban ee ah in dawada COVID-19 ee suuragal ah in lagu qaadi doono qiimeyn “adag”, sida uu qoray wargayska Punch ee Nigeria.
Madaxweynaha Madagascar Rajoelina wuxuu sii wadaa inuu difaaco COVID Organics ka dhanka ah dhaleeceynta. Wareysi uu siiyay idaacadaha Faransiiska Isniintii, ayuu ku sheegay in dunidu aysan dooneynin inay qirato “waddan sida Madagascar oo kala ah sameeyey dawo organic ah si loo badbaadiyo adduunka.”
Peter Seeberger wuxuu aaminsan yahay in Madagascar ay ka faa iidaysan karto hadii maadada Artemesia ay cadeyso inay wax ku ool tahay barashada Max Planck iyo tijaabooyinka caafimaad ee xigay.
Seeberger ayaa yidhi “Maanta, ilaa 10% baahiyaha artemisinin ee daroogada duumada ayaa laga soo saaray Madagascar,” ayuu yidhi Seeberger.
Sidaa darteed waxay u noqon kartaa soo jiidasho Madagascar inay soo saarto wax badan oo maxalliga ah gudaha.
DHawaaqa Qarax kale oo xoogan oo laga Maqlay Muqdisho
Kulan looga hadlayay Amniga oo ka dhacay Muqdisho